နော့ကင်းခေါက်သံကြားခြင်း နှင့် ပရီအင်ဂနစ်ရှင်း - Myanmar Automobile and Equipment Directory
ကားမိတ်ဆွေများ အမေးများသော အကြောင်းအရာတစ်ခုမှာ ကာဗွန်ဆေးတယ်ဆိုတာ ဘာလဲ ? ဘာကြောင့်ဆေးရတာလဲ ? ဘယ်အချိန်မှာ ဆေးရမှာလဲ ? ကာဗွန်ဆေးလိုက်လို့ အကျိုးအပြစ် များသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ?
1- ကားအင်ဂျင်သည် ဒီဇယ်/ဓါတ်ဆီ ဘာသုံးသုံး H နဲ့ C ဒြပ်ပေါင်းသာဖြစ်၏ ဒီတော့ ကာဗွန်ဆိုသည့် အညစ်အကြေးသည် ဘေးထွက်ပစ္စည်းအဖြစ် ကျိန်းသေထွက်မည်။
2-အထူးသဖြင့် အ်ိပ်ဇောဆိုတဲ့ ဒွါရ လမ်းကြောင်းကို အနဲနဲ့အများလာရောက်ပိတ်မည်
3-လိုတာထက်ပိုပိတ် ထွက်ချင်တိုင်းမထွက်ရတော့ စက်စွမ်းအားကျပါမည် လီဗါနင်းသော် စက်က ထရမယ့်အစား တောက်တောက် ကောက်ကောက်ဆိုသည့် မီးခေါက်သံသာထွက်လာမည်။ ၄င်းကို နော့ကင်းခေါက်သံဟု ခေါ်ပါသည်။
4- အဆင်ပြေသည့် အင်ဂျင်စက်တစ်လုံးသည် ထိုအသံ မထွက်ရပါ
5-အဆင်မပြေခြင်းဆိုသည့်အင်ဂျင်သည် လောင်စာဆီ ဒုက္ခ ပေးခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်ရပြန်သည်
6-အခုပြောမည့်အကြောင်းသည် Gasoline Engine ကို နမူနာထားကာပြောပြမှာမို့ ဒီဇယ်အင်ဂျင်ကို မေ့လိုက်စို့။
1-ဆလင်ဒါထဲသို့ လေနဲ့လောင်စာကိုစုပ်သွင်းသည် (အင်ဂျက်တာက လောင်စာကို ဆေးထိုးသွင်းပေးသည်)
2-အဝင်ဗါး အထွက်ဗါး ၂ခုစလုံး ပိတ်ချိန်တွင် ပစ္စတင်ကအပေါ်တွန်းတင်ပြီး လေကျစ်ပေးသည် လေကျစ်အားကြောင့် လောင်စာရောလေထုထည်သည် အပူချိန်တစ်ခုနဲ့ပူလာသည် ။
3-ဆလင်ဒါထိပ်ဆုံး ရောက်လျှင် လေကျစ်အား အမြင့်ဆုံးဖြစ်မည် အချိန်ကိုက် Spark Plug မှ လျှပ်စစ်မီးပွားထွက်ပေးလျှင် ပေါက်လောင်ကွဲပါတော့သည် ထိုခုတ်ချက်သည် စက်စွမ်းအားရသောခုတ်ချက်ဖြစ်ပေသည်
4-ပစ္စတင်အောက်ဆုံးရောက် ထပ်မသွားနိုင်တဲ့။အဆုံး အပေါ်ပြန်တက်လာရပြန်သည် တက်လာသည်နဲ့ အချိန်ကိုက် ကာဗွန်များစွာပါသည့် ဓါတ်ငွေ့အညစ်အကြေးများကို ပြင်ပသို့စွန့်ထုတ်ရန် အထွက်ဗါးက အချိန်ကိုက်ဖွင့်ပေးရသည်။
ဒါက အတိုဆုံးရှင်းပြလိုက်တဲ့ ၄ ချက်ခုတ်အင်ဂျင် ခု ရှင်းပြချင်တဲ့ အရှည်ဆုံးသဘောတရားများကတော့
A- ဓါတ်ဆီသည် ဓါတ်ငွေ့ရည်ဖြစ်သည် အငွေ့ပျံအားနဲလို့ အရည်အဖြစ်မြင်နေရသော်လည်း
ဓါတ်ငွေ့သာဖြစ်လို့ Gas လို့သာခေါ်ပါသည် ဟုတ်မဟုတ် သိချင်လျှင် ဓါတ်ဆီထဲကို ဆားထည့်လျှင် Gas မထွက်တော့လို့ မည်သည့်အင်ဂျင်မှ မနိုးနိုင်ပါ ပန်းထိမ်သုံးသောဖါးဖိုထဲမှ လက်ကျန်ဓါတ်ဆီဖြင့်လည်း အင်ဂျင်မနိုးနိုင်ပါ Gas ကို မီးရှို့ပြီးသွားလို့ဖြစ်ပါသည်
B-အင်ဂျင်ထဲရောက်နေတဲ့ လောင်စာရောလေသည် ဘယ်လောက်ရှိတဲ့ အပူချိန်နဲ့ တွေ့တွေ့ ကြိုတင်ခါ မီးလောင်မပေါက်ကွဲရပါ ကြိုတင်ပေါက်ကွဲခဲ့ပါလျှင် စက်စွမ်းအားအနဲငယ် ကျသွားသလို နော့ကင်းဆိုသည့် မီးခေါက်သံ အနဲငယ်လည်းကြားရပေလိမ့်မည်။
C-ဒါကြောင့်မို့ မီးလောင်လွယ်တဲ့ Gasoline အရည်က်ို ဆလင်ဒါထဲမှာပူတိုင်းအလိုလိုထမလောင်ရလေအောင် ဓါတုနည်းပညာအမျိုးမျိုးနဲ့ ထိန်းချုပ်ကာ ထုတ်လုပ်ပေးရလေတော့သည် ဒါကို RON = Research Octane Number များနဲ့ သတ်မှတ်ပေးရသည်ပူတိုင်းထမီးမလောင်တဲ့ No. များကတော့ ထဲထဲဝင်ဝင် လူသိတာ 90- ကစပေသည် သူ့ထက် နံပါတ်မြင့်လေ ပူတိုင်းမီးမလောင်လေပေါ့ Octane No. အမြင့်ဆုံး 100- ဆိုပါတော့သူကဆရာကြီးပေါ့ 100- ဆိုတာ ငါကွ ငါသည်ကား ပူတိုင်းမလောင်တဲ့ Gasoline ကွ ငါသည်ကား Spark မီးပွား Flame မီးတောက်တစ်ခုနဲ့သာတွေ့မှ လောင်ရမယ်လို့ ကတိပြုထားတယ်ကွ ဆိုပါတော့
အကြောင်းရှိလို့ ရှည်ရတာပါ ထပ်ပြောပေးပါမယ် ပလပ် ပလပ် နဲ့ အလွယ်ပြောနေတဲ့ လျှပ်စစ်မီးပွားထွက်ပေးတဲ့ Spark Plug မှာ အပူချိန်မြင့်ခံနိုင်အောင် ကြွေလွှာကောင်းကောင်း နဲ့ ငုံပေးထားရတယ် ဘယ်လောက်ပူသလဲ ဆိုရင် စက်နိုးစဉ်ကာလတစ်လျှောက် အထဲမှာ မီးသွေးခဲလို ရဲရဲ နီနေပါတယ် ဒီတော့ အပေါ်ကပြောတဲ့ ဖြစ်စဉ်အရ လွန်ကဲအပူချိန်နဲ့တွေ့တိုင်း ထပေါက်ကွဲနေရရင် ဘယ်အဆင်ပြေတော့မလဲ ဒါကြောင့်မို့ Octane No. မြင့်လောင်စာရည်များနဲ့ မောင်းနှင်ပေးရတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်ကြပေတော့
စက်ဆီ Engine Oil
လောင်စာဆီ Gasoline အရည်အသွေးနိမ့်များကလည်း ကာဗွန်ထွက်လွယ်ပြန်တယ် ဗူးလေးရာ ဖယုံဆင့်ရတဲ့ နောက်အကြောင်းတစ်ခုကတော့ နေရာတကာ ကာဗွန်ဂျိုးများလာတာမှာ အိပ်ဇောဗါး အထွက်မှာ ကပ်တာ အဆိုးဆုံးပါ မီးသွေးအခဲတွေလို အဖြစ်များလာကာ ဆလင်ဒါ အခန်းထဲသို့ကွာကျလာတတ်တယ် နူရာ ဝဲစွဲ ဆိုသကဲ့သို့ ခုပြောတဲ့ ကာဗွန်မီးသွေးခဲကလည်း မီးလေးစွဲနေနိုင်သေးတယ်
ကဲ ကဲ ပြင်းထန်စွာ ပေါက်လောင်ကွဲဘို့ လောင်စာရောလေထုထည် Spark Plug ကမီးပွင့်ချိန်ကိုစောင့်နေတုန်း Octane No. နိမ့်တဲ့ လောင်စာအာနိသင်ကြောင့် ပလပ်ကြွေက ရဲရဲနီ အပူချိန်ကြောင့်ဖြစ့်ဖြစ်
ဗါးကာဗွန်ဂျိုးက ပြုတ်ကျတဲ့ မီးသွေးခဲ အပူချိန်ကြောင့်ဖြစ်ဖြစ် အချိန်မတိုင်ခင် ပေါက်လောင်မှု ဖြစ်ကြရလို့တသ်ကယ်အချိန်ကိုက်ပေါက်လောင်ရမယ့် အချိန်မှာလောင်စာအာနိသင်အား နဲရတယ်ကွန်ပရက်ရှင်းဆိုတဲ့ လေကျစ်အား မသိမသာနဲသွားရလို့ နော့ကင်းခေါက်သံလေးနဲ့ အတူ စက်စွမ်းအားကျရပါတယ်ဗျာ။
အဆုံးသတ်ပြောရရင် ခုသဘောတရားများ အစအဆုံး သိရင် လိုအပ်ရင် ကာဗွန်ဂျိုးဆေးသင့်တယ် Ron No. အမြင့်လောင်စာဆီကို မိမိကားနဲ့ လိုက်ဖက်အောင်သုံးသင့်တယ် လောင်စာဆီ အရည်အသွေးကြောင့် နော့ကင်းယ ခေါက်တာလား။ ကာဗွန်ဂျိုးတွေ တစ်ကယ်များလို့ ကာဗွန်ဆေးသင့်သလား ဆိုတာ ကျွမ်းကျင်သူနဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ် မိမိကား ဘာကြောင့် ကာဗွန်များရသလဲဆိုတာလည်း အဖြေရှာသင့်တယ် ဘာပေါ ညာပေါ့ ဒါကြောင့်မို့ အချိန်မတိုင်မီ ကြိုတင်လောင်တဲ့ Pre Ignition & Knocking ဆိုတဲ့ သဘောတရားလေးကို ပြောပြပေးလိုက်တယ်
Read: ရန်​ကုန်​စည်ပင်နယ်နိမိတ်​​​​အတွင်း လျှပ်​စစ်​ဆိုင်​ကယ်​များ စီမံချက်ဖြင့် ​​တရားဝင်​ စီးနင်းခွင့်​ပေးသွားရန်​ရှိ